२०७७-०३-२९, सुग्रीम विश्वकर्मा
आदरणीय जनसमुदाय नमस्कार !
हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली दिन प्रति दिन अलपत्र हुदै गइरहेको छ। निजी बिधालयका संचालक मित्रहरु को आर्थिक अवस्था निकै दैनिए भइरहेको अवस्था देखिदै छ। अब त शिक्षक को तलब र बैंक को ब्याज र घरको भाडा कसरी तिर्ने?
यस्तो समस्या हुदै हुदै पनि उनीहरू चुपलागेर बसेका छ्न। सरकार को आदेश के हुन्छ। त्यसको निर्णय के हुन्छ होला पर्खाइमा छ्न। म बिचारले सरकार ले निजी बिधालय लाई राहत, र अनुदान दिने प्रस्ताव पेब्सन र एन पेव्सन ले गर्नु पर्छ। तर सरकार ले केही पनि गरिरहेको छैन।
हाम्रो शिक्षा मन्त्री ज्यूको एउटा मात्रै जवाफ आइरहेको छ। कि मन्त्रालयले निर्णय नगरे सम्मा स्कूल संचालन गर्न सकिदैन ।
यदि मन्त्रालयले नै सबै गर्ने हो भने निजी बिधालयलाई राहत र अनुदान पुर्याइ पुरै शैक्षिकसत्र नै बन्द गरिदिनु पर्यो। यो मेरो जबाफ हो सरकारलाई ।
स्थानीय सरकारले बिधालय सुधारने ग्यारेन्टी लिदै आएको ले स्थानीय सरकारले पनि बिधालय सम्बन्धी केही बिकल्प खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।
तर यहाका जनप्रतिनिधिले पनि केही न केही गर्नु पर्छ। शिक्षा समितिले बिधालयलाई अनुगमन गरी संख्या को बाडफाड गरी समूहमा बिभाजन गरी बिधालय चलाउन सकिन्छ।
ShareTweetSharePin0 Sharesपैसा एउटा येस्तो वस्तु हो ,जसको आवस्यकता हरेक ब्यक्ति लै हुन्छ । जस्तै बिना पानी को मान्छे आफ्नो जीवन ब्यतित गर्न सकिदैन ,ठिक त्यस्तै बिना पैसा को जीवन ब्यतित गर्न सकिदैन । किनकि पैसा को आवस्यकता हरेक पैला मा हुन्छ ।खाना खाना को लागि पैसा चाहिन्छ , यात्रा गर्न […]